तपाइका छोरीले यस्तो व्यबहार देखाउन थाले भने बुझ्नुहोस् उनीहरु भित्री रुपमा पुरुष हुन् ! – Sanjal Nepal
Homeरोचकतपाइका छोरीले यस्तो व्यबहार देखाउन थाले भने बुझ्नुहोस् उनीहरु भित्री रुपमा पुरुष हुन् !
तपाइका छोरीले यस्तो व्यबहार देखाउन थाले भने बुझ्नुहोस् उनीहरु भित्री रुपमा पुरुष हुन् !
November 9, 2020 admin रोचक 10485
काठमाडौ । पछिल्लो समय आएका विज्ञान र प्रविधिको विश्लेषणले धेरै कुराको जिवन्तता दिन थालेको छ । मानव जीवन र आँचरण पत्ता लगाउन अझै सजिलो हुन थालेको छ । यही क्रममा मुम्बई सरकार पोलिटेक्निक कलेजका प्रिन्सिपल जो मानव अंग अन्वेषकको रुपमा अध्ययन गरिरहेका थिए ।
उनले यस्तो निश्कर्ष निकाले की जुन छोरी छोराको जस्तो कपडामा चाहाना राख्छे भने उसको भित्री पुरुष बराबर हुन्छ । अंग महिलाका भएपनि सोच भने पुरुषको जस्तो राख्छे । चालचलन व्यवहार पुरुषकै जस्तो राख्छे । यसको असर के छ त भन्दा यस्ता महिलामा प्रजनन क्षमता एकदम कम हुँदै जान्छ । उनी सृष्टि कार्यमा असफल हुन्छे ।
यस्तो अवस्थामा उसले धेरै महिलासँग नै हिमचिम बढाउँछे । पुरुषसँग उसको आउजाउ नै निक्कै टाढा हुन थाल्छ । पुरुषसँग शारीरिक व्यवहार गर्न उसलाई निक्कै सकस पर्छ । उसले महिला नै चुन्छ । एकदिन न एकदिन उ आफ्नो अंग नै फरक भएको महसुस गर्छे ।
अनि उ भित्र महिला भएको भएपनि सँधैका लागि पुरुष भएर बाँच्न चाहान्छे । बाँच्न खोज्छे । केहीले यो समाजको सीमा तोड्छन् र सँधैका लागि पुरुष जस्तै भएर बसेका हुन्छन् । कोहीले सक्दैनन् र उनीहरु बाहिर महिला जस्तो भएर देखावटी जीवन चलाई रहेका हुन्छन् ।
November 21, 2020 admin रोचक 4573
एजेन्सी । धार्मिक शास्त्रअनुसार महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा मान्ने चलन छ । यसैले तपाईकी श्रीमती नै घरकी लक्ष्मी हुन् । मानव सभ्यताको सुरुवाती सृष्टि कर्ता नै महिला हुन् । स्त्री वर्ग अगाडी थिएन् भने मानव सभ्यता
November 13, 2020 admin रोचक, समाचार 23571
November 19, 2020 admin रोचक 7371
काठमाडौ / एक श्रीमतीले आफ्ना प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानकै जीवन लिएकी छिन् । यो घटनाको रहस्य पुलिसले सुल्झाएको छ । घटनामा संलग्न पत्नी सिमर कौरलाई पक्राउ गरिएको छ । उनका प्रेमी अझै पनि फरार रहेको बताइएको
LEX 18 agenda conversation: Job club (403573)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378214)
Hello world! (313854)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (288638)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? (142182)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104744)
दैविक शक्ति अकला देवी मन्दिर जहाँ आफै शंखघण्ट बज्छ (84917)